Iindaba - Iimpendulo zemibuzo malunga nokuchaneka kwesixhobo sokubumba
Iimpendulo zemibuzo malunga nokuchaneka kwesixhobo sokubumba
1. Loluphi uhlobo lwezixhobo ekufuneka ulisebenzisile?
A: kuxhomekeke kwimveliso kunye neempawu ezibonakalayo. Iimveliso ezinokuthi ziqhubeke ngenqindi zinokusebenzisa umatshini wokufa okuzenzekelayo (ngemisebenzi edityanisiweyo), enje ngetape enamacala amabini, iphepha lokusasaza, isibonakalisi esisetyenziswe kwiimveliso zedatha ye-elektroniki; isebe lemveliso elinye lisebenzisa i-punch ye-hardware, i-punch hydraulic, umatshini webhiya webhokisi yemibala, i-punch desktop desktop, njl.
2. Uyila njani isixhobo sokubumba kunye namanyathelo okhuseleko?
Impendulo: ngokubanzi ngokwemizobo yomthengi kunye nemizobo (1: 1) yokwenza isixhobo sokubumba. (ukuba imfuneko yokuchaneka ayiphezulu, iisampulu zinokubonelelwa). Ukutyeba kunye neepropathi zezinto ezisikwe ngumthengi zichonga inkqubo yokuvelisa yokusweleka (enje: ukuphakama kwemela, imela enye esecaleni, imela ephezulu nezisezantsi, imela yokufakelwa kabini, njl.njl.).
3. Ubungakanani bemveliso kunye nobubanzi besixhobo sokubumba?
Impendulo: isixhobo sokubumba singenza zonke iintlobo zemizobo engagunyaziswanga, kwaye ukunyamezelana kwemveliso kunokuchaneka ngaphakathi kwe- ± 0.03mm. Isetyenziswa ngokubanzi kwibhodi yesekethe ebhetyebhetye, izixhobo zasekhaya, iifowuni eziphathwayo, iinxalenye zemoto, iimveliso zedijithali, ushicilelo kunye nokupakisha imveliso, iimveliso zeplastiki, i-gasket ye-elektroniki, iithoyi zodoli, ukuzimela kunye neminye imimandla. Inkqubo yokusebenza yenkampani yethu yeeyure ezingama-24 iqinisekisa umgangatho kunye nokusebenza kakuhle, kwaye iqinisekisa ukuhanjiswa kwangexesha.
4. Umjikelo wemveliso yokubumba kwesixhobo?
A: kwimeko yoku-odola ngokungxamisekileyo, ngokobungakanani bemveliso, ukuthunyelwa kungalungiswa kwakamsinya emva kweeyure ezi-4 emva kokufumana iodolo (isiqinisekiso sekoteyishini siyathunyelwa). Kwiimeko eziqhelekileyo, iimpahla zinokuhanjiswa ngosuku olulandelayo.
5. Ukubakho kobunzulu bokulawula ukubetha ngesixhobo?
Impendulo: isixhobo sokusika uvavanyo lokususa izinto zokuvavanya ukungasebenzi kwento yokulungisa ingxaki, amava anquma imveliso. Ukuphakama okuphezulu kwendawo yokufa kunokuba yi-2mm. Ukuba umbandela imveliso ungqindilili kakhulu kwaye kunzima, umngxuma blanking ivuliwe kwaye umsantsa imxinwa kakhulu, ayikhuthazwa ukusebenzisa sokubola isixhobo ngasekhohlo, kodwa ukusebenzisa nokukrola isixhobo ngumngundo. Isitshixo esonakalisiweyo sesixhobo sokubumba esingenakulungiswa, kwaye isixhobo sokubhala sokubumba sinokuphinda silungiswe ukulungiswa.
6.Umthamo wemveliso kunye nobubanzi besicelo sesixhobo sokukrola?
A. isixhobo sokukrola kufa sinokusetyenziselwa ukunyathela izinto ezinzima kunye nokuqina kobunzima (njenge-EVA foam, isiponji, zonke iintlobo zefilimu yeplastiki, iphepha le-mica, izinto zokwambathisa, njl.njl. icala elinye lemela kunye ne-0.6 mm yomngxunya ongenanto. Ephakamileyo naphantsi, imela enye yecala, ukuphakama kweentlobo ezahlukeneyo (ezifana nezinto eziyi-8mm) zingaba ngu-5mm okanye ngaphezulu. Olona ncedo lukhulu kukuba amaxesha okunyathela aphezulu kwaye incakuba inokulungiswa isetyhula.
Inkunkuma-Drop Ukuchitha Rotary Die, Steel Die mfanekiso, Auto-Material Ukuzalisa mfanekiso Die, Umphezulu Umphezulu mfanekiso Die, Ukufa kweLaser, Imaski Rotary Die,